Seranam-piaramanidina Ivato : Hiova endrika tanteraka -
AccueilRaharaham-pirenenaSeranam-piaramanidina Ivato : Hiova endrika tanteraka
Raikitra amin’izay ny tena asa. Taorian’ny fametrahana ny vato fehizoro, nosantarina omaly ny fanombohan’ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Afaka telo taona eo ho eo, ho afaka handray fiaramanidina efatra miaraka ny seranam-piamanidina vaovao eny Ivato ka ny telo amin’izy ireo dia hampiasa irony karazana tonelina mampitohy avy hatrany ny toerana fiandrasana ny fiaramanidina. Tontosa omaly teo amin’ny toerana hanatanterahina ny asa ny lanonana notarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ho fanombohana ny asa. « Efa 50 taona no nisian’ny seranam-piaramanidina teo aloha, fa tao anatin’ny roa taona kosa no niezahantsika hanombohana ny asa », araka ny fanamarihany tamin’ny lahateniny. Sehatra iray nandrasana tamin’ny fanatanterahana ny asa ny fanangonana ireo loharanom-bola hanatanterahana ny asa izay fiaraha-miasa avy amin’ny sehatra tsy miankina samihafa ary tarihin’ny orinasa Ravinala Airports izay miandraikitra ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Fascène any Nosy Be.
Hanana endrika maoderina sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity seranam-piaramanidina vaovao ity izay afaka handray mpandeha hatrany amin’ny 1.700.000 isan-taona. Ao anatin’ny velaran-tany 17.500m² no hametrahana ireo fotodrafitrasa izay ahitana ny trano lehibe maoderina nefa mametraka ny endrik’i Madagasikara. « Manana endrika Ravinala io trano lehibe io ary hanaraka ny fenitra sy ireo fepetra iraisam-pirenena », araka ny fanazavan’ny Ravinala airports. Ao anatin ‘izany ny fiarovana amin’ny afo, ny toerana fanadiovana ireo rano maloto, ny fanavahana ny solika…
Ny ministera misahana ireo Tetikasan’ny filoham-pirenena, ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana no miantsoroka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa hotanterahin’ny Ravinala Airports izay nanankina ny ampahan’ny asa amin’ny orinasa CMBI ahitana ny Colas Madagascar sy Boutgues Bâtiment International. « Misy amin’ireo kojakoja ampiasaina amin’ny fanorenana no efa vita aloha ka ny fanambarana no atao eto », araka ny fanazavan’izy ireo.
Ireo fotodrafitrasa hita ao amin’ny seranam-piaramanidina vaovao
Tonelina telo mifandray mivantana amin’ny fiaramanidina
Fiantsonana ho an’ny fiara 400
Toeram-pivarotana lamaody, firavaka fahatsiarovana, asa-tanana…
Toeraka fanakalozam-bola sy banky
Fandraisana ireo olo- manankaja
Biraon’ireo kaompania mpitatitra